मोटोपन रोकेर, चिटिक्क मिलेको शरिर बनाँउन मन भए यी कुरा फलो गर्नुहोस् | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २६ श्रावण २०७६, आईतवार १५:३५ लेखक नेपाली जनता
एजेन्सी । चिटिक्क मिलेको शरिर कसको चाहाना हुँदैन र । तरपनि खानपान, अभावका कारण वा ब्यस्तताका कारण असन्तुलन आहार व्यबहारले नै हो अनावश्यक मोटो हुनु । न मोटो न दुब्लो । ठिक्कको, चिटिक्कको अनि सुन्दर । आकर्षक शरीरको चाहना राख्नुहुनेले तल पढ्नुहोला । हरेक वर्ग अनि उमेर समूहका मानिस सुन्दरताप्रति चासो राख्छन् । फरक के भने कसैले चाहना व्यक्त गर्छन् त कसैले गर्दैनन् । व्यक्त नगर्नेहरू भित्रभित्रै दुःखी हुन्छन् । व्यक्तित्वलाई आकर्षक बनाउने क्रममा केही सीप नचलेपछि आफैंभित्र धेरै प्रकारका गुनासा थुपारेर बस्छन् ।
स्वास्थ्य एवं सुन्दरताको प्रमुख शत्रु हो मोटोपन । खासगरी हामीकहाँ ४० कटेका महिला तथा पुरुषहरू पछिल्लो मोटोपनबाट पीडित देखिन्छन् । त्यसैले त हरेक बिहान मर्निङ वाक गर्नेदेखि योग र जुम्बा चहार्ने मात्र होइन जीम गर्न धाउनेहरूको संख्या बढ्दै छ, त्यसरी चहार्नेको एउटै उद्देश्य हुन्छ–आफूलाई आकर्षक बनाउने, पेट घटाउने, स्लिम बन्ने । के यो सम्भव छ ? पक्कै छ । नेपोलियन बोनापार्टले भनेका छन्–‘ असम्भव भन्ने शब्द मूर्खहरूको शब्दकोशमा मात्र हुन्छ ।’ प्रयास गरे पूरा नहुने केही कुरो छैन । तर यसका लागि त्यसको कारण पहिल्याएर उचित उपाय अपनाउनुपर्छ ।
तौल किन घट्दैन ?
तौल बढ्न थालेपछि त्यसलाई घटाउन धेरैले गर्ने सबभन्दा पहिलो प्रयास हो–डाइटिङ । प्रारम्भिक चरणको डाइटिङ सबैलाई रमाइलै लाग्छ । किनकि दुईचार दिनको डाइटिङबाट केही केजी तौल घटेको अनुभव हुन्छ । यद्यपि, डाइटिङको क्रम लामो समय जारी रहन सक्दैन । केही दिनपछि नै खानपानको बानी पुरानै अवस्थामा फर्किसक्छ, अनि ज्यान पनि मोटाउन थाल्छ ।
यसो हुनुपछाडि पनि वैज्ञानिक कारण छ । केही दिनको डाइटिङले शरीरको क्यालोरी घट्छ । क्यालोरी घटेपछि शरीरको तौल पनि स्वतः घट्छ । प्रारम्भिक चरणमा कम खाना खानु, कतिपय खाना खाँदै नखानु तौल घटाउने राम्रो उपाय हुनसक्छ । तर, त्यसरी खाना नै खान कम गर्दा शरीरलाई आवश्यक कुनै न कुनै पोषक तत्वको कमी हुन्छ ।
परिणामस्वरुप, थकान तथा डिप्रेसनले सताउन थाल्छ । थकान र अल्छीपनाले गर्दा काम गर्नै मन नलाग्ने हुन्छ र बाध्य भएर खानेकुरा खाने पुरानै बानी अपनाउन थालिन्छ । डाइटिङ बिर्सिएपछि पहिलेको भन्दा बढी खान थालिन्छ । परिणामस्वरूप शरीर डाइटिङ गर्नुअघिको भन्दा पनि मोटो देखिन थाल्छ ।
क्यालोरी कसै गरे घट्दैन
सामान्यतः एकजना स्वस्थ पुरुषका लागि दिनको १ हजार ८ सय तथा महिलाका लागि १ हजार ५ सय क्यालोरी पर्याप्त मानिन्छ । डाइटिङ गर्ने क्रममा करिब ५ सय क्यालोरी घटाउन सकिन्छ । तर, एउटा अनुसन्धानबाट के पत्ता लागेको छ भने अधिकांश व्यक्तिले क्यालोरीको गणना गलत तरिकाबाट गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, रेष्टुराँमा गरिएको जंकफूडसहितको डिनरबाट प्राप्त हुने क्यालोरी भोलिपल्ट जीम गरेर घटिहाल्छ नि भन्ने सोचिन्छ, जुन सोचाइ नै गलत हो । शरीरमा जम्मा भएको क्यालोरी घटाउन त्यति सहज छैन ।
कार्बोहाइड्रेटले शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ । शरीरले प्राप्त गर्ने ५५ देखि ६५ प्रतिशत कूल क्यालोरी कार्बोहाइड्रेटबाटै प्राप्त हुन्छ । कार्बोहाइड्रेटले शरीरमा इन्धनको काम गर्छ । डाइटिङ गरेको बेला शरीरबाट कार्बोहाइड्रेट कम गर्ने क्रममा ग्लाइकोजनको स्तर घट्छ र शरीर ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत एमिनो एसिडतर्फ उन्मुख हुन्छ ।
त्यसबाट मांशपेशीभित्र भएका तन्तुहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । पाचन प्रक्रियाका लागि पनि कार्बोहाइड्रेट अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले डाइटिङ गर्दा कार्बोहाइड्रेटलाई पूर्ण रूपमा कटौती गर्नु हुँदैन, बरु सेतो चामल तथा चिनीको साटो फलफूल र सागसब्जीको मात्रा बढाउन सकिन्छ । मैदा र त्यसबाट बन्ने पदार्थहरूको खपत कम गर्नुपर्छ ।
शरीरको तौल घटाउनुको अर्थ शरीरबाट क्यालोरीको मात्रा घटाउनु हो । त्यसका लागि नियमित शारीरिक अभ्यासका साथै खानपिनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खानपिनमा त्यस्ता खाद्यपदार्थलाई समावेश गर्नु पर्छ, जसले क्यालोरी पनि घटाओस् र शरीरमा नकारात्मक प्रभाव पनि नपरोस् ।
यसका लागि सकारात्मक चिल्लो पदार्थ तथा नकारात्मक चिल्लो पदार्थबीचको फरक थाहा पाउनु पर्छ । रातो मासुको सट्टा माछा अथवा सेतो मासु अनि दूधबाट बनेका चिल्लोरहित खाद्यपदार्थहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । खानामा ताजा सागसब्जी तथा फलफूलको मात्रा बढाउनु पर्छ । सेतो चिनी, मदिराजन्य पदार्थ तथा टिनको डब्बामा प्याक गरिएका खाद्य पदार्थ खान छोड्नुपर्छ ।
कस्तो हुनुपर्छ डाइट प्लान ?
कुनै पनि बेला (बिहान, दिउँसो र बेलुका) को खाना छाड्नु हुँदैन । बिहानको ब्रेकफास्ट त छाड्नै हुँदैन । ब्रेकफास्टमा सकेसम्म बढी प्रोटिन हुनु पर्छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार प्रोटिनयुक्त खाजाले तौल घटाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले ब्रेकफास्टमा अण्डा, फलफूल, सिरियल्स (कर्न फ्लेक्स), दही तथा ग्रीन टी समावेश हुनु राम्रो मानिन्छ ।
छोटो समयको अन्तरमा केही न केही खाइरहनु पर्छ । धेरै बेरसम्म पेट खाली भयो भने ग्याँसको समस्या हुन्छ । यसबाहेक राम्ररी ब्रेकफास्ट नगर्नाले दिउँसोको खाना धेरै खाने सम्भावना हुन्छ ।
दिउँसोको खाना खानुभन्दा करिव आधा घण्टाअघि केही फलफूल खानुपर्छ । फलफूलले खाना पचाउन सहयोग गर्छ खाली पेटमा फलफूल खानाले शरीरले ऊर्जा प्राप्त गर्छ ।
गर्मी मौसममा दिनको करिब ८ देखि १० गिलास पानी पिउनु पर्छ । यद्यपि, खाना खाइरहेको बेला भने पानी पिउनु हुँदैन । खाना खाँदा पानी पिउने बानी छ भने त्यसले हाम्रो पाचन प्रक्रिया सुस्त पार्छ । त्यसैले खाना खाँदै गर्दा धेरै पानी पिउनु हुँदैन । पानी पिउनै छ भने खाना खानुभन्दा कम्तीमा २० मिनेट अघि अथवा पछि पिउन सकिन्छ ।
खानेकुरालाई राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ । एउटा अनुसन्धानले के प्रमाणित गरेको छ भने हामी खानालाई चपाउन जति समय खर्च गरिन्छ, शरीरले त्यति नै कम क्यालोरी ग्रहण गर्छ ।
लामो समयसम्म खाना चपाउँदा मस्तिष्कमा समेत पेट भरिसकेको छ भन्ने सन्देश जान्छ । यसो भएपछि थोरै खाइन्छ । तसर्थ खानाको प्रत्येक गाँसलाई कम्तीमा ३५ देखि बढीमा ५० पटकसम्म चपाउनु पर्छ ।
खाने बेलामा दशतिर ध्यान दिनु हुँदैन । अरू कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । अरू कुरामा ध्यान दिँदा ध्यान खानाबाट अन्यत्र जान्छ र आवश्यकता भन्दा बढी खाइन्छ ।
राति ८ बजेपछि गरिष्ठ भोजन गर्नु हुँदैन । बेलुकी सकेसम्म कम क्यालोरीयुक्त खाना खानु पर्छ । सुप अथवा झोल पदार्थमा जोड दिनु पर्छ ।
बिहान होस् अथवा साँझ, हरेक दिन हिँड्नु पर्छ । त्यसरी हिँड्दा कसैसँग कुरा गर्नु हुँदैन । कम्तीमा २५ मिनेटसम्म लगातार हिंड्नुपर्छ । एक किलोमिटर हिँड्नका लागि १० मिनेटभन्दा बढी समय लगाउनु हुँदैन ।
हरेक दिन एकै प्रकारको व्यायाम गर्ने हो भने त्यसबाट शरीरले फाइदा पाउँछ । यद्यपि, त्यसले तौलमा भने फरक पार्दैन । त्यसैले तौल नै घटाउन मन भए जिमशाला नै धाउनु पर्छ ।
हरेक दिन एकै स्थानमा हिँड्नु हुँदैन ।
एकै पटक ३० मिनेटसम्म व्यायाम गर्ने समय छैन भने दिनको तीन पटक १०–१० मिनेटका दरले व्यायाम गर्न सकिन्छ ।
कस्ता खाद्य पदार्थ खाने, कस्ता नखाने ?
सोडा अथवा कार्बोनेटेड ड्रिंक्सको साटो फ्रेस जूसलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
कुकिज, चिप्सजस्ता खानेकुरा खानु हुँदैन, फलफूल, जुस अथवा ड्राई फुड खान सकिन्छ ।
ह्वाइट ब्रेडको साटो ब्राउन ब्रेड उपयुक्त हुन्छ ।
फास्टफुड, क्यान फुड, प्याक्ड फुड, फ्रोजन फुड तथा ओवर कुक्ड फुड सेवन गर्नुहुँदैन । हरेक दिनको खानमा फलफूल, ग्रीन सलाद आदिलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
एक साताको टाइम टेबल बनाएर आफ्नो तौल बढेको छ भने के कुराले बढायो अथवा घटेको छ भने के–के गरेर घट्यो भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ । तौल बढाउने कुरा भेटियो भने त्यसलाई त्याग्नुपर्छ । तौल घटाउने कुरालाई नियमित गर्नुपर्छ । छोटो समयमै धेरै तौल घटाउने सपना देख्न छाड्नुपर्छ ।
तीस वर्ष कटेपछि नियमित रूपमा आफ्नो तौल परीक्षण गरिरहनुपर्छ । केही किलो तौल बढ्नेबित्तिकै त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डवीच बालुवाटारमा छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डवीच प्रचण्डनिवास बालुवाटारमा समसामयिक परिस्थितिबारे बुधबार छलफल…
निमित्तको भरमा वीर अस्पताल
काठमाडौं । नेपालकै जेठो तथा ठूलो सरकारी अस्पतालको रूपमा रहेको वीर अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र ट्रमा…
दिन दहाडै चक्कु देखाएर लुटियो ६ लाख
भक्तपुर। भक्तपुर नगरपालिका ल्यासिंखेल चुपिनघाँटस्थित कहाँल्चामा मोटरसाईकलमा आएका दुई जनाले चक्कु देखाएर रु.६ लाख लुटेका छन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिका नगरकोट…
भाषण र वक्तव्यबाजीले मुलुक चल्दैन
केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नेको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि ओलीले खासै काम गर्न सक्नु भएको छैन । वाचा बन्धनसहतिका…
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिाकाक मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका दाजुभाइले आफ्नो जग्गा मिच्न खोजेको भन्दै मुद्दासहित अदालत पुगेका छन् । पूर्वन्यायाधीश…
अवैध दुई किलो सुन र चार किलो चाँदी प्रहरी नियन्त्रणमा
चितवन । नारायणगढको एक सुनचाँदी पसलबाट प्रहरीले दुई किलो ७६ ग्राम सुन र चार किलो ६ सय १७ ग्राम…
डियर कमरेड से नो टु एमसीसी 72 views
प्रहरी जवान पदमा उत्तिर्ण हुनेहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशित (नामावली)5views